China Imozulu Resistance yangaphandle Wood Composite WPC Ulenze Decking abavelisi kunye nabathengisi | ULihua
Ukuxhathisa kwemozulu yangaphandle Wood Composite WPC Decking
Ixabiso:$ 2.25 / UM
WPC Ulenze Decking
Imbonakalo-mhlaba, iGadi, iiVillas
● I-WPC yokuhombisa eyona nto iphambili yi-PE, iintsinga zomthi kunye nezongezelelo. Ukuhonjiswa kwethu kwe-WPC kudumile kwihlabathi liphela njengoko sisebenzisa izinto zendalo.
Egqithileyo Ukhuselo lokusingqongileyo yangaphandle ukuhonjiswa ngokulula ukufakelwa kweplanga yeWPC
Okulandelayo: Eco-friendly Wood edityanisiweyo Co-extrusion WPC Decking
I-Q2: Ngaba iimveliso zeplastiki zomthi ezidityanisiweyo zinobuhlobo kokusingqongileyo?
A: Ewe Ngenxa yokuba i-WPC ingayi kutyhoboza, isonge okanye itshise ngendlela iinkuni ezenza ngayo, iyanciphisa ngokumangalisayo umjikelo wenkcitho yokulungiswa kunye nokutshintshwa kwaye ishenxise ukusetyenziswa rhoqo kwepeyinti eyingozi kwindalo, amatywina kunye namabala.
I-Q3: Ngaba ubiza iisampulu?
I-Q4: Ngaba ungabonelela ngeesampulu zeencwadi zokukunceda ukuba uphuhlise intengiso?
I-Q5: Ngaba unganikezela ngokupakisha uyilo ngokwezicelo zabathengi?
edityanisiweyo WPC decking
Ulenze WPC decking
Yangaphandle Manzi Garden WPC Kucingo olubiyele Screen For ...
ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking ngaphandle, WPC decking edityanisiweyo, WPC nokwadala, WPC decking umgangatho, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC,